GALLERY: Tsvangirai's life in pictures | News24
Africa > Zimbabwe > GALLERY: Tsvangirai's life in pictures
(FILES) In this file photo taken on November 24, 2017 Morgan Tsvangirai, leader of Zimbabwe's main opposition Movement for Democratic Change, attends the inauguration of Zimbabwe's new president in Harare. Morgan Tsvangirai, the veteran Zimbabwean opposition leader who fought Robert Mugabe's regime for many years, died on February 14, 2018 after battling against cancer, a party official said. / AFP PHOTO / Zinyange AUNTONY
(FILES) In this file photo taken on March 13, 2007 Zimbabwe opposition leader Morgan Tsvangirai (L) leaves the court in Harare. Morgan Tsvangirai, the veteran Zimbabwean opposition leader who fought Robert Mugabe's regime for many years, died on February 14, 2018 after battling against cancer, a party official said. / AFP PHOTO / DESMOND KWANDE
(FILES) In this file photo taken on March 25, 2008 Zimbabwe's opposition leader Movement for Democratic Change (MDC) Morgan Tsvangirai addresses his supporters in Buhera his home town. Morgan Tsvangirai, the veteran Zimbabwean opposition leader who fought Robert Mugabe's regime for many years, died on February 14, 2018 after battling against cancer, a party official said. / AFP PHOTO / DESMOND KWANDE
(FILES) In this file photo taken on March 27, 2007 Zimbabwe opposition leader Morgan Tsvangirai gives his first public address in Harare since he was arrested and then assaulted while trying to attend a rally on March 11. Morgan Tsvangirai, the veteran Zimbabwean opposition leader who fought Robert Mugabe's regime for many years, died on February 14, 2018 after battling against cancer, a party official said. / AFP PHOTO / STR / ALEXANDER JOE
(FILES) In this file photo taken on August 1, 2013 Zimbabwean presidential hopeful Morgan Tsvangirai speaks in Harare. Morgan Tsvangirai, the veteran Zimbabwean opposition leader who fought Robert Mugabe's regime for many years, died on February 14, 2018 after battling against cancer, a party official said. / AFP PHOTO / ALEXANDER JOE
(FILES) In this file photo taken on September 11, 1999 Zimbabwe's former opposition leader Morgan Tsvangirai, speaks at the inaugural rally of the Movement for Democratic Change (MDC) in Harare, Zimbabwe. Morgan Tsvangirai, the veteran Zimbabwean opposition leader who fought Robert Mugabe's regime for many years, died on February 14, 2018 after battling against cancer, a party official said. / AFP PHOTO / PAUL CADENHEAD
(FILES) In this file photo taken on July 2, 2008 Zimbabwe opposition leader Morgan Tsvangirai addresses the media in Harare. Morgan Tsvangirai, the veteran Zimbabwean opposition leader who fought Robert Mugabe's regime for many years, died on February 14, 2018 after battling against cancer, a party official said. / AFP PHOTO / ALEXANDER JOE
(FILES) In this file photo taken on March 11, 2009 Zimbabwean Prime Minister Morgan Tsvangirai gestures at his wife Susan's burial in Buhera about 220km from Harare, Zimbabwe. Susan Tsvangirai died in a car accident, the prime minister was also involved in the accident reporting only minor injuries. Morgan Tsvangirai, the veteran Zimbabwean opposition leader who fought Robert Mugabe's regime for many years, died on February 14, 2018 after battling against cancer, a party official said. / AFP PHOTO / DESMOND KWANDE
(FILES) In this file photo taken on October 22, 2012 Zimbabwe President Robert Mugabe (R) and Prime Minister Morgan Tsvangirai exchange greetings during the opening ceremony of the constitutional meeting to review the draft constitution in Harare. Morgan Tsvangirai, the veteran Zimbabwean opposition leader who fought Robert Mugabe's regime for many years, died on February 14, 2018 after battling against cancer, a party official said. He was 65. / AFP PHOTO / Jekesai NJIKIZANA
(FILES) In this file photo taken on May 10, 2000 leader of Zimbabwe's opposition party Movement for Democratic Change (MDC), Morgan Tsvangirai, addresses media in Harare. Morgan Tsvangirai, the veteran Zimbabwean opposition leader who fought Robert Mugabe's regime for many years, died on February 14, 2018 after battling against cancer, a party official said. / AFP PHOTO / Odd ANDERSEN
(FILES) In this file photo taken on October 9, 2009 Prime Minister of Zimbabwe Morgan Tsvangirai poses during a visit of the Fundation Cristobal Gabarron in Valladolid. Morgan Tsvangirai, the veteran Zimbabwean opposition leader who fought Robert Mugabe's regime for many years, died on February 14, 2018 after battling against cancer, a party official said. He was 65. / AFP PHOTO / Dominique FAGET
(FILES) In this file photo taken on March 14, 2009 Zimbabwe Prime Minister Morgan Tsvangirai(L) gestures to Zimbabwean President Robert Mugabe(R) at the funeral of former defence forces commander Vitalis Zvinavashe at a shrine on the ouskirts of the capital Harare. Morgan Tsvangirai, the veteran Zimbabwean opposition leader who fought Robert Mugabe's regime for many years, died on February 14, 2018 after battling against cancer, a party official said. / AFP PHOTO / Jekesai NJIKIZANA
(FILES) In this file photo taken on March 29, 2008 the leader of the Zimbabwean opposition Movement for Democratic Change, Morgan Tsvangirai, casts his vote in Harare. Morgan Tsvangirai, the veteran Zimbabwean opposition leader who fought Robert Mugabe's regime for many years, died on February 14, 2018 after battling against cancer, a party official said. He was 65. / AFP PHOTO / DESMOND KWANDE
(FILES) In this file photo taken on June 16, 2009 Zimbabwean Prime Minister Morgan Tsvangirai gives a press conference at government headquarters in Stockholm, after his meeting with his Swedish counterpart Fredrik Reinfeldt. Morgan Tsvangirai, the veteran Zimbabwean opposition leader who fought Robert Mugabe's regime for many years, died on February 14, 2018 after battling against cancer, a party official said. / AFP PHOTO / SCANPIX SWEDEN / Claudio Bresciani
(FILES) In this file photo taken on September 15, 2008 (fromL) Zimbabwean MDC (Movement for Democratic Change) breakaway faction leader Arthur Mutambara, Zimbabwe's President Robert Mugabe, opposition's leader Morgan Tsvangirai and South African Thabo Mbeki pose after signing the power-sharing accord in Harare. Morgan Tsvangirai, the veteran Zimbabwean opposition leader who fought Robert Mugabe's regime for many years, died on February 14, 2018 after battling against cancer, a party official said. / AFP PHOTO / DESMOND KWANDE
(FILES) In this file photo taken on February 11, 2009 Zimbabwe's opposition leader Morgan Tsvangirai (L), head of the Movement for Democratic Change (MDC), is sworn in by President Robert Mugabe at the State House in Harare. Morgan Tsvangirai, the veteran Zimbabwean opposition leader who fought Robert Mugabe's regime for many years, died on February 14, 2018 after battling against cancer, a party official said. / AFP PHOTO / ALEXANDER JOE
(FILES) In this file photo taken on July 27, 2013 Zimbabwe's Prime minister and leader of the Movement for Democratic Change (MDC), Morgan Tsvangirai, addresses an election campaign rally in Chinhoyi. Morgan Tsvangirai, the veteran Zimbabwean opposition leader who fought Robert Mugabe's regime for many years, died on February 14, 2018 after battling against cancer, a party official said. / AFP PHOTO / Jekesai NJIKIZANA
(FILES) In this file photo taken on August 3, 2009 South African leader Jacob Zuma (L) shakes hands with Zimbabwean prime minister Morgan Tsvangirai at African National Congress headquarters Luthuli house in Johannesburg. Morgan Tsvangirai, the veteran Zimbabwean opposition leader who fought Robert Mugabe's regime for many years, died on February 14, 2018 after battling against cancer, a party official said. He was 65. / AFP PHOTO / PABALLO THEKISO
(FILES) In this file photo taken on June 22, 2009 British Prime Minister Gordon Brown (L) greets his Zimbabwean counterpart Morgan Tsvangirai outside No 10 Downing Street in London. Morgan Tsvangirai, the veteran Zimbabwean opposition leader who fought Robert Mugabe's regime for many years, died on February 14, 2018 after battling against cancer, a party official said. He was 65. / AFP PHOTO / CHRIS RATCLIFFE
A picture taken on September 2, 2017, shows Zimbabwean opposition leader Morgan Tsvangirai addresses a crowd gathered during his last opposition rally at White City Stadium in Bulawayo. Morgan Tsvangirai, the veteran Zimbabwean opposition leader who confronted Robert Mugabe's regime for many years, died aged 65 on February 14, 2018, after a battle with cancer, a party official said. / AFP PHOTO / Jekesai NJIKIZANA